Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Cadhadii Waynayd Ee Uu Alex Oxlade-Chamberlain Ka Muujiyay Badalkii Lagu Saaray Kulankii Man United. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Cadhadii Waynayd Ee Uu Alex Oxlade-Chamberlain Ka Muujiyay Badalkii Lagu Saaray Kulankii Man United.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa hoos u dhigay cadhadii waynayd ee uu xidiga kooxdiisa ee Alex Oxlade-Chamberlain uu ka muujiyay markii uu badalka ku saaray kulankii Anfield ee Manchester United.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa shaxda Jurgen Klopp ku soo bilawday labadii kulan ee ugu danbeeyay Premier league isaga oo fursad buuxda ka sii helay dhaawacyadii Naby Ketia, Fabinho iyo James Milner.
Laakiin daqiiqadii 66 aad ee kulankii Manchester United waxa uu Klopp badal ku saaray Alex Oxlade-Chamberlain si uu Adam Lallana ciyaarta u soo galiyo balse falcelintii cadhada lahayd ee uu xidiga reer England sameeyay ayaa dareen abuurtay.
Laakiin Klopp ayaa sido kale daqiiqadii 61 aad waxa uu Alex Oxlade-Chamberlain badal ku saaray kulankii ka horeeyay ee Tottenham taas oo keentay in xidigani uu cadho wayn ku muujiyay markii uu kaydka kooxdiisa soo gaadhay kulankii United.
Ka hor kulanka Liverpool iyo Wolves, waxaa Klopp wax lag waydiiyay falcelintii cadhada lahayd ee Chamberlain wuxuuna yidhi: “Isagu muu cadhaysnayn, kaliya waxa uu u muuqday sidaas.Isaga waan waydiiyay wuuna fiican yahay”.
“Waa caadi in ciyaartoy uu doonayo in uu ciyaaro 90ka daqiiqo, laakiin waxaa waajib nagu ah in aanu wixii hore wax ka barano. Oxlade waxa uu anaga noo yahay ciyaartoy si aan la rumaysan karin muhiim noogu ah” ayuu Klopp hadalkiisa raaciyay.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaa jira xiliyo ciyaarta ah oo ay ciyaartoydu u muuqdaan in ay yara daalan yihiin wayna muujiyaan. Waxaan isku dayaa in aan ciyaartoyda akhristo inta ciyaarta lagu jiro oo aan isku dayo in aan fahmo waqtiga ay tamar ahaan heerkeeda leeyihiin, go’aa ayaanan gaadhaa”.
Waxaa la filayaa in Alex Oxlade-Chamberlain uu booskiisii lumin doono kulanka Wolves maadaama oo uu Fabinho soo laabtay isla markaana uu daqiiqado ka ciyaaray kulankii Man United.
Halkan ka daawo falcelintii cadhada lahayd ee uu Chamberlain ka sameeyay markii la saaray kulankii Man United.
Liverpool ayaa imtixaan adag ku mari doonta garoonka kooxda Wolves iyada oo Reds isku dayi doonta in ay sii wataan rekoodhka guuldaro la’aanta ay xili ciyaareedkan ku soo jireen.